अमेरिकी ड्रोन आक्रमणबाट पाकिस्तानमा तालिवानका बरिष्ठ नेता मारिए | Jukson
अमेरिकाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा पाकिस्तानी तालिवानका बरिष्ठ नेता खालिद मेहसुदको मृत्यु भएको छ । अफगानिस्तानको सीमानजिकै उत्तरी वजिरिस्तानमा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा परी तेहरिक—इ—तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी)का उपनेता खालिद मेहसुदको मृत्यु भएको हो । टीटीपीका एक पवक्ताले पनि उपनेता मेहसुदको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । मेहसुदको मृत्युपछि पाकिस्तानी तालिवानलाई थप कमजोर बनाएको छ ।
टीटीपी दर्जनौं आत्मघाती र अन्य आक्रमणमा संलग्न रहँदै आएको छ । उनकै कमाण्डमा गत डिसेम्बरमा पाकिस्तानको पेशावरस्थित एउटा क्याम्पसमा आक्रमण गर्दा कम्तिमा ९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६ जना घाइते भएका थिए । मेहसुदको मृत्युपछि टीटीपीका लडाकूहरु छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानमा शरण लिन बाध्य भएको पाकिस्तानी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।(एजेन्सी)
विग्रिएको हो दयाहाङसँग सम्बन्ध ? यस्तो भन्छिन् प्रियंका
साढे तीन बजेसम्म सरकार गम्भीर नभए डा. केसीको अनसन बस्ने
साफ च्याम्पियनसीप : शनिबार नेपालको अग्निपरीक्षा
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पोखराका होटल भरिभराउ